I-Volcanic Nature - Ulwandle Nokuzola - I-Airbnb
I-Volcanic Nature - Ulwandle Nokuzola
Indlu ngasolwandle endaweni yokuthula okukhulu nakho konke ukunethezeka. Jabulela ukushona kwelanga okuhle kakhulu esiqhingini esiseduze nolwandle lwaseMosteiros namachibi emvelo. Kuyisimo esihle seholide lomndeni.
Igumbi lokulala elingu-1 elinombhede wabantu ababili, igumbi lokuhlala elinethuba lokuba nemibhede emi-2 yabantu abangabodwa. Ikhishi elihlome kahle, igumbi lokugezela eli-1, ilondolo, indawo yokuphumula yangaphandle, i-solarium, ingadi, indawo yokupaka yamahhala kule ndawo.
+ Indawo yokupaka yangasese
+ Umshini wokuwasha nokomisa.
Indawo ezungezile yemvelo, indlu enendawo yangaphakathi ene-rustic nethokomele. I-balcony/solarium enokubukwa kolwandle nezintaba, ingadi, indawo yokuzilibazisa enezoso, indawo yokudlela kanye nezihlalo zangaphandle. Qaphela: ukuba khona kwamakati alahlekile engadini.
Ukudla kwasendaweni okujwayelekile: ama-limpets athosiwe, ingwane ethosiwe, i-chicharros ethosiwe.
Ngiyayithanda impilo elula nengenasizotha kuleli dolobhana elincane. Umoya omusha ukuze ululame ezinkingeni zokuphefumula, indawo ezungezile icishe iphelele.
+ Ibhishi imizuzu eyi-10/15 ngezinyawo
+ Amachibi okubhukuda emvelo aqhele ngemizuzu emi-3 ngezinyawo
+ Amachibi okubhukuda eFerraria okugeza amahhala ashisayo, imizuzu eyi-10/15 ngemoto.
Indawo ekahle yokubhukuda, ukudoba, ukudoba ngaphansi kwamanzi kanye nokugeza olwandle Ichweba elincane lapho ungathenga khona izinhlanzi. Izindlela ezinhle zokuhamba. Imizuzu engu-15 ngemoto ukusuka e-Sete Cidades (enye yezimanga zethu zemvelo).
Ubudlelwano obunobungane kakhulu nokwesekwa noma nini lapho kudingekile, ngokuhlonipha ubumfihlo Ukuba khona kwabalimi ngezikhathi ezithile ukuze banakekele ingadi.
Inombolo yepholisi: 1550